Pele: Neymar xoog ahaan kuma wanaagsan inuu ka ciyaaro England Premier League. - Caasimada Online
Home Warar Pele: Neymar xoog ahaan kuma wanaagsan inuu ka ciyaaro England Premier League.
Pele: Neymar xoog ahaan kuma wanaagsan inuu ka ciyaaro England Premier League.
Ciyaaryahankii hore ee xulka Brazil Pele ayaa sheegay in weeraryahanka kooxda Santos Neymar uusan awood ahaan ku wanaagsaneyn inuu ka ciyaaro horyaalka Ingiriiska.
20 jirkaan ayaa bilihii lasoo dhaafay looga gacan haatinaayey kooxaha Manchester United iyo Chelsea, laakiin halyeeyga ay isku wadanka yihiin uma arko inay taasi xidigaan u tahay dooq wanaagsan.
“Kuma waafaqsani Neymar inuu hada u baqoolo Yurub. Sanadii lasoo dhaafay wakiilka Neymar wuxuu la hadlay aabihi sababtoo ah wuxuu doonayey inuu aado kooxo ka dalabanaayey Engalnd,” ayuu Pele u sheegay Fox Sports.
“Markaas hadii aan arko waxaan doonayey inaan u sheego inaysan ku saxneyn inay aadaan kubada cagta Ingiriiska, sababtoo ah aad ayey ugu adag tahay Neymar, kaasoo ah ciyaaryahan weyn, xoog ahaana kuma fiicana.”